You are at:Home»Nhau Dzeutano»Kuongororwa gomarara rezamu kwakakosha
By Munyori weKwayedza on	 August 18, 2017 · Nhau Dzeutano
SVONDO rino tiri kupangana mazano pamusoro pegomarara rezamu, iro riri kubata vanhu zvakanyanya mazuvaano. Iri igomarara rinotangira mumacell ezamu, padundundu pamwe nemuhapwa.
Kuvanhukadzi, gomarara iri rinowanzotanga mutumachubu tunofamba nemukaka kuenda kunyatso pamwe nekunogadzirwa mukaka (lobules).
Uwandu hwevanhu vari kubatwa negomarara iri hwawanda zvikuru mazuvaano kubvira kumakore ekuma1970’s nekuda kwezvikonzero zvakasiyana izvo zvinosanganisira mararamiro ave kuita vanhu akaita sekunwa doro, kuputa fodya nekudya chikafu chine mafuta akawanda.
Vakawanda havazive kuti vanhurume vanogona kubatwa nechirwere chegomarara rezamu. Murume mumwe chete anogona kubatwa nechirwere ichi pavanhukadzi 100 vanenge vaine gomarara rezamu.
Sangano reZimbabwe National Cancer Registry rinoti gomarara rezamu raive nechikamu che12,5 percent pazvirwere zvose zvemakomara kuvanhukadzi vechitema mugore ra2013.
Sangano iri rinoti zvakare chikamu che7 percent chevanhu vakafa nekuda kwezvirwere zvegomarara panguva imwe chete iyi.
– Kuputa fodya zvakanyanya nekunwa zvinodhaka (kunwa mabhodhoro edoro anodarika maviri kana uri munhurume uye rimwe chete pazuva kuvanhu- kadzi)
Zvaunofanira kutarisa kana uchizviongorora
– kuomarara kwenyatso kusingarwadze kana kukurisa kwetsinga
– kuita tumapundu kana kuti rash isinganzwisisike panyatso kana pazamu
– kuramba uchirwadziwa mukati mezamu
– kuburitsa zvausunganzwisise zvaita seropa nepanyatso
– kuita tumapundu kana kuti rash panyatso nenzvimbo yakatenderedza nyatso
– kuomarara kusinganzwisisike kwenyatso
– kuzvimba kana kurwadza kwemuhapwa